Erdogan Oo Ka Badbaaday Isku Day Dil – Heemaal News Network
Erdogan Oo Ka Badbaaday Isku Day Dil
Wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa sheegaya in gaadhi uu saarnaa askari ka tirsan ciidamada booliiska laga helay walxaha qarxa, kaas oo qayb ka ahaa ilaalada isku soobax uu ka qaybgalay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Qalabkan qarxa ayaa waxaa helay saraakiil ka tirsan sirdoonka Turkiga daqiiqado ka hor inta uusan bilaabmin isku soo bax ka dhacay magaalada Siirit ee koonfur bari dalkaasi. Waxaana ka hor tegay koox booliis ah oo bambaanooyinka ku takhusasay.
Qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga ayaa sheegay in uu ahaa isku day dil oo lala damacsanaa madaxweynaha. Waxaa la bilaabay baaritaan lagu ogaanayo cidda dhigtay qalabkan.
Wakaalada wararka ee Anadolu ayaa sheegtay in booliska Turkiga ay bam hoos ka heleen gaari uu saarnaa askari ka tirsan booliska rabshadaha ka hortaga oo loo xil saaray inuu ka shaqeeyo munaasabad uu ka qeyb galay madaxweyne Tayyip Erdogan oo ka dhacday bariga Turkiga.
Qalabkan ayaa la sheegay in laga helay magaalada yar ee Nusaybin oo ku taalla xuduudka Suuriya, halkaasoo sarkaalku uu doonayay inuu u kaxeeyo meel 200 km (125 mayl) waqooyi bari ka xigta Siirt, oo ah goobta Erdogan uu markii dambe kula hadlay dad bannaanka isugo soo baxayt.
Gaadhiga ayaa la dhigay guriga sarkaalka oo ku yaala Nusaybin. Bamkii waa la furay, waxaana la bilaabay baadhitaan, sida ay sheegtay Anadolu.
Hamza Dag, oo ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga talada haya ee Erdogan, ayaa sheegay in booliisku ay dib u dhigeen sii deynta xogta si ay uga fogaadaan khalkhal gelin shacabka.
Kooxaha baadhitaanka ayaa sidoo kale hubiyay kamaradaha amniga ee gobolka.
Madaxweyne Erdogan oo khudbad ka jeedinayay isu soo bax ka dhacay magaalada Siirt ayaa waxa uu ku sheegay in argagixisadu aanay meelna kaga jirin mustaqbalka dalkiisa iyo gobolkaba.
Waxa uu ku adkeystay in Turkiga uu sii wadi doono dagaalka uu ka wado gudaha iyo dibadda xuduudka inta uu ka saarayo argagixisada dalka.
Waxa uu sidoo kale bogaadiyay doorka bulshada rayidka ah iyo adeegyada dowladda ee sanadihii la soo dhaafay.
Qudbadii uu ka jeediyay Siirt, Erdogan waxa uu sheegay in uu rajaynayo in sarifka lacagaha qalaad ee isbedbedelaya iyo sicir-bararka ay si deg deg ah u degi doonaan,kadib markii uu iib taariikhi ah ka gaday
“Haddii Alle idmo waxaan xasilin doonnaa dhammaan isbedbedelka sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad muddo aan sidaas u dheereyn,” ayuu Erdogan u sheegay dad isugu soo baxay magaalada Siirt ee bariga dalkaasi.
Erdogan ayaa waxaa kale oo uu sheegay in dulsaarku halis yahay isaga oo ku adkaystay siyaaddiisa ku aaddan arrintaas .
“Weligay kama tanaasuli doono arrintan sababtoo ah heerka dulsaarka ayaa ah cudur ka dhigaya kuwa taajiriinta ah kuwa sii taajira oo hodan sii noqdahala saboolkana uu ka sii dhigayo kuwo sii faqiira” lacagta Turkiga ee Liiraha.
Ex Wasiir Seed Oo Safarka Madaxwayne Biixi Ee USA Soo Dhaweeyay
Heemaall March 14, 2022
Koonfur Galbeed Oo Soo Afmeertay Dorashadii Golaha Shacabka